Phantse ileta yokugqibela eya kwabo ndisebenzisana nabo ... andishiyanga -Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2013 cadastre, egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Namhlanje nje kwiintsuku ezilishumi ezidlulileyo, njengoko uyazi, ndiyekile ukusayina amaphepha ahambelana neprojekthi endigcina ndixakekile kwaye ndikhuthazekile iminyaka esixhenxe. Ngokuqinisekileyo baya kulinda inkcazo, kuba kuphela ngabantu abasondeleyo abasaziyo malunga neentsuku ezimbalwa ezidlulileyo, nangona bekucwangcisiwe ukusukela ngala mhla ndagqiba kwelokuba andizukuphulukana nenkuthazo yam. Ndilinde ubusuku obuzolileyo behotele kunye nesigqibo sokuba, ukuba ndisuse okanye ndishiye imigca embalwa yokubhala.
Kulungile, andizukuphinda ndilungelelanise umthetho, kwaye izimvo zam ziya kuba ziingcebiso zenjongo elungileyo kuphela. Omnye umntu uya kuthatha umceli mngeni ovela ekuguqukeni kwenqanaba lenkqubo, ngaphandle kokulahla into esebenzayo, okanye umonde kwizinto ezilula ezisebenza kuphela ukuchaphazela imeko yabo basentsimini ukuncancisa ngozuko.
Ndonelisekile kukuba ndakhe nawe ukusuka ekuqaleni imodeli yokomeleza esekwe kulawulo oludibeneyo, apho amaqhawe eshishini ayingobantu abatshaya i-geo kodwa ngabantu abaqhelekileyo abenza imisebenzi yemihla ngemihla, kuba bayayithanda. Kulilungelo kum ukuba ndifunde kwiindidi ezintathu, abandifundise ukuba bayayazi indlela yokuluvuselela kwakhona ulwazi lwabo kwisikimu esiqale kwilaphu lokutyela, kwaye sondliwa yingqeqesho yabo mhlawumbi bebengabuqondi ubukhulu bayo ekuqaleni, kutheni kungenjalo Ufuna ukuba wonke umntu abe yingcali kodwa enze into elungileyo kubo, kunye negalelo elongezelelekileyo loomalume noomakazi abalindelwe kuphela yintlonipho yam yokwazi ukudibanisa ngobuchule oko bakwaziyo.
Ukuvela kwabasebenzisi abangama-300 abavela kumazwekazi amabini kwi-webinar yam yokugqibela ayingqinelani nendlela abandibone ngayo xa ndandiqala ukuyiphakamisa kwiminyaka esi-7 eyadlulayo, ngakumbi kuba sivelise uninzi lwendlela ezakusebenza ngayo ngokucinga ngokuvakalayo kwindlela evulekileyo, nabantu ukuba ngaphezulu kwabahamba nam ngeli xesha baba "ngabahlobo bam." Kodwa into enomdla ngalo mbandela kukuba ayisiyonto inomtsalane, kuba ayiqali kwimibono emitsha, ukusuka ekusebenzeni kweendlela ezicacileyo:
Thatha i-230 yokuqesha amagcisa okwethutyana isizukulwane se-16 endinokusicebisa ngamehlo am avaliweyo, nditsho nesatifikethi sommeli waseMelika. Nangona besilele kum kwakanye, kuba bandiphoxile kweyesibini, kodwa endizakumnika ithuba lesithathu kuba ngenye imini bendinabo phambi kwam, kwaye ndiyazi kakuhle into endiyibonileyo emehlweni abo ngaloo mva kwemini kwiNtlambo iQuimistan.
Ukuba neengcali kwi-cadastre ukuphunyezwa kufundisa konke awaziyo, ukwazi ukuba ngelinye ilanga akayi kwenza ngaphandle kwalo; kodwa ndiqinisekile ukuba ndasayinela ngenxa yokukwazi ukwenza ama-clones ngokuphakama kwayo nje.
Ukuguqula itekhnoloji yentsimi elula ibe ngumqhubi wendlela onokwazi oomasipala abangama-20 ngaxeshanye, abaphethe amakhwenkwe awasekwa kwiminyaka embalwa edlulileyo; ukuba ukhule waya kwinqanaba lokuthemba nje kuba yena ngokwakhe wabafundisa indlela yokusebenzisa isikhangeli seGarmin ukwenza iigridi zonxibelelaniso ze-UTM.
Ukuphula i-taboo ukuba ibhinqa elihle alikwazi ukuba ngumcebisi we-cadastre ngamakhono afanayo njengendoda; ngubani ongakhokelela iqela le-leperos yintsimi eyayiyidla ngokupheleleyo, kodwa ngubani ongayifumana inhlonipho ngobungcali bakhe ukulinganisa isitishi esipheleleyo kwimizuzwana ye-53, ngaphandle kokulahlekelwa ngumfazi we-cheto yakhe; loo ntambama ihlukaniswe ibe yi-cabildo evulekileyo eyenza ixabiso le-cadastral ye-quinquennium entsha kwaye ebusuku ibuyisela ubumnandi bokuzibona kwisibuko kunye neengcinga ezikhethekileyo kuloo mntu unqume ukuthanda.
Ukufumana abantu ababengengabo abantu abavela kwi-cadastre, kodwa abathi, xa bendivayo ndithetha ngeplani, bayiguqulela indlela yolawulo, imali, iinkqubo zokuphatha ... yeyona nto ibalaseleyo; hayi ngenxa yokuba sisonwabile sikunye, kodwa ngenxa yeempazamo zabanye safumana amandla ethu okuncedisana.
Ukukholisa oomasipala ukuba i-commonwealth ingakwazi ukuthatha iindima ze-cadastre, kwaye ukuba oomasipala bangabanika isibonelelo semali abayifumanayo kwirejethi yonyaka ukwenzela ukuba i-cadastre yinto eyenza i-intsebenziswano yansuku zonke.
Ukuze ndiqinise ngefowuni ukuba nabani na ongaphesheya komgca ngumntu oya kuncedisa iingcamango zam; ngubani owaziyo ukuba amava iminyaka 15 ngaphezu kwam, kodwa ekuphela kwendlela ukuba athembeke kum babubone elula phandle bam, obulula bafole ukwazi ukwazi ukuba nganeno canabis ihlabathi liphela iphambene.
Ukuqhuba esinye sezigaba eziphambili kwenkqubo, kwaye undibuyise ukwaneliseka ukuba iintsuku ezintathu ngaphambi kokuba umthetho owakhuselweyo uvunyiwe kwi-congress yesizwe ngexesha lokuphazamiseka Unyulo.
Fumana abahlobo nkqu kwabo bantu ndibakhubekisileyo kangangexesha elinye ...
Ndiza kudweliswa ngakumbi, kodwa ndiza kuphinda kuphela into abayaziyo ..., nangona kuye kwakho ubungqina kumntu wesithathu.
... apho ndiya khona.
Iminyaka eli-10 eyadlulayo ndandiyinxalenye yegeofumed yokoqobo, apho ndafumanisa ukuba akukho nto ingcono kunokwenza into esiyithandayo; okoko nje ukuphefumlelwa kuhlala. Khange ndiyinxalenye yenkqubo leyo, ihagu nje yeginea ababeyisebenzisa ukuvavanya ukuba kunokwenzeka na ukupholisha umntu oqhelekileyo; Nangona ngenxa yoko kufuneka bandithumele kwikhosi yeDale Carnegie, bandifumanele i-visa yeentsuku ezingama-30 yaseMelika, ndinike izihlangu ezinkulu kuneenyawo zam, undenze ndiqiniseke ukuba ndingenza izinto kakuhle hayi kuba ndandikrelekrele kodwa ngenxa yokulingana phakathi koqeqesho nobuyatha.
Amava ayehlukile; Ngenxa yoko, sasiphazama kunye izihlandlo ezininzi, kodwa sikwava nobushushu obuza ngokuphumelela okokuqala ibhaso lelizwe elaphantse lasibona sizalwa. Phantse xa iHonduras yabetha iMexico kwiAzteca. Kwakumnandi ngolunye usuku ukuba siphambi kwabanye abantu abatshayayo abavela kwihlabathi liphela, sibaxelela ukuba senze njani ngomnqweno esinokukwenza, kodwa ngengqondo yento eyayiphelelwe lixesha kunye netekhnoloji yaloo minyaka. Ukuba kwi-FIG yaseCzechoslovakia umfana ozobe iModeli ye-LADM kwi-abstract uthe… Děvky ty jsi kdo, kurva Hondurasu?
Akukho nto intsha esiyifundileyo, safunda ukuba ivili sele liqulunqiwe. Ukuba akufuneki kutshintshwe, ukwahlulwa kwe-asi enqwelweni kuphela komlinganiso ovumela amahashe amabini awatsalayo ukuba angarubuzelani kwaye yiyo loo nto ngoku iimoto zinalo mlinganiso. Kodwa sikwafundile ukuba obo bubanzi ziziporo zikaloliwe ... ngaphandle kwesizathu kuba loo hulk ayinakuze irhuqwe ngamahashe.
Ngenxa yala mava, ndiyaqhubeka nokudibana nabantu abakrelekrele kwiindawo ezininzi. Inobuchule kodwa ilula kwaye iphandle; Ndifunde kubo ukuba izihloko ezihloniphekileyo zamanqanaba ezifundo zibalulekile kuphela kumazwe ambalwa aseLatin American; ezijongeka zilungile kwisiginitsha ye-imeyile kodwa zingafuneki kwimeko yokucacileyo. Ndifundiswe ukuba nekratshi embindini wesivakalisi ukuze ndihlale ndonwabile, kodwa ukuba nditshayise utyikityo ukuze undikhumbuze ukuba ukuzithemba kuqala njengeLaplace eguqukayo.
... hlala apho
Iimeko zobomi zandihambisa ukuba ngene kwiindawo zomasipala zika-cadastres, ukuqonda oko abantu abafuna khona ngaphantsi kwaye kutheni naxa bevela phambili bekunokwenzeka ukuba babeke ukwenza isondlo se-cadastral kwinkqubo kazwelonke.
Kwakucacile, kodwa kwakufuneka sibekho ukuze singqine. Ngenxa yokuba i-cadastre yeenjongo ezininzi ayiqulathanga isixa sedatha esinayo, kodwa amandla okunceda abantu abaqhelekileyo. Umasipala akazuzi nto ngokwenza i-cadastre, ayisiyondleko kwaphela; ishishini lakhe phantse lonke ukuqokelela irhafu kwaye ngenxa yokuba wayengenakwenza cadastre; yiyo loo nto ingeniso ingaphezulu. Ishishini lakhe alenzi izicwangciso zokusetyenziswa komhlaba, zibiza kakhulu, kodwa kufuneka enze abantu baphile ngcono; zeemephu ezipeyintwe kwi-pdf azonelanga.
Ke into esiyenzileyo ibicacile. Yenza umsebenzi we-cadastre kunye nabaphumeleleyo kwisikolo samabanga aphakamileyo, ngokuchaneka ukuba ishishini lifuna ukuze oosodolophu bathande indleko zalo. Ukuqinisekisa amalungu ebhunga ukuba ngedola nganye atyale imali kwi-cadastre banokubuyisa i-6 yezibonelelo kubemi. Siyaziqinisekisa ukuba oomasipala khange basidinge kwa ukuba ziingcali, koko babe ngabafundi bezona zinto zisisiseko, kodwa sinokwakha umfuziselo koko kuza kuba nefuthe kwimigaqo-nkqubo yelizwe.
Ke hlala apho ukhoyo. Ngenxa yokuba inzuzo evela kwigalelo lam kuwe ayibobuchwephesha, njengaleyo khosi ye-AutoCAD kwiveki e-Intibucá; Baya kuqonda ukuba loo mini yayiza kusondela kuwo wonke umntu okokugqibela; ukubonisa ukuba asiyazi indlela yokwenza ubeko kwiMicrostation, kodwa ukuba kunokwenzeka ukuzala ukucinga ngokuvakalayo. Igalelo lam belingasokuze lisombulule iingxaki zabo okanye ndinike intsikelelo kubani ukuba ndiqeshe okanye ndikhabe umthambo usikhokelele ekubeni sibonise ukuba ukuphefumlelwa kwanele ukufumana italente kunye neziqhamo kwezona ndawo zisomileyo.
Hlala apho kuba uChe kuFacebook ulungile: eli zwekazi alihlali kwinkululeko, kodwa ngabantu abanakho ukuzikhulula. Hlala apho kuba uqeqesho kwizinto ezilula luya kukunika into oza kuyibonisa. Gcina ixesha uzalise iintsilelo zakho, upelo olubi, ikhondo lakho elingagqitywanga lomsebenzi waseyunivesithi, ukuthanda kwakho ukufunda, ukwenza uphando,
kwaye ngaphezu kwako konke ukubhala; kuba ayisiyonto eyonwabisayo ukugqama, kunoko sisixhobo sokucwangcisa izimvo. Okucacileyo akuthathi cwangco; Kodwa izimvo zethu kufuneka zinxulunyaniswe ngendlela ecwangcisiweyo kwaye ziboniswe kumbhalo ebhodini, kumanqaku ebhlog, kwiincwadana zoqeqesho, kulungelelwaniso lwenkqubo elungileyo, kwiinkqubo zokuqonda ...
Ukuba kuyilo lwefayile ye-cadastral kwiphepha le-Excel kunye nokusasazwa ngokukhululekileyo, bayababiza; ukuba bahlaziye indlela yokuxabisa abaqeshelwe ukuququzelela umasifundisane; Ukuba ngenye imini yokubhala kwibhlog, babizwa besuka eHolland ukuya kumodareyitha iphaneli yeengcali kwiimodeli zeBIM… bandixelela ukuba kutheni oko kuya kundonwabisa. Kodwa yenza yonke into ngomnqweno, ukusukela ekucofeni inqaku kwi-orthophoto ukuya ekuzobeni ipropathi kumgangatho wesithathu wekhondomu: kuba ukuba uyayenza iphefumlelwe, uya kuyidlulisela loo nto kwabanye.
Kwaye ukuba ngenye imini uziva ukuba kukho i-geofume ekutsala ngaphezu kwale uyenzayo, yithathe. Kuba ukusebenza gwenxa ayilophawu lokuvalwa, sisiphakamiso sokugxila kwivumba kwinto ekhoyo, ukuzama ukusikhumbuza ukuba akukho nto ilunge ngaphezu kokuphefumlelwa.
... andishiyanga. Ndivele ndabuyela kwitafile yokuphefumlela.
Ndiyabulela ngokuyithumela kwi-16 ebonakala ngathi kulo hlulelo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Inkululeko kunye nolawulo - phantse yonke into ilungele iNkomfa ye-9 gvSIG
Post Next Microstation: Ngenisa unxibelelaniso kunye nezichazi ezivela kwi-ExcelOkulandelayo »